Xiddigaha Man Utd Fernandes iyo Rashford oo u dabaal degeen kadib labii gool ee Lingard kulankii West Ham.
Home Horyaalka Ingiriiska Xiddigaha Man Utd Fernandes iyo Rashford oo u dabaal degeen kadib labii...
Ciyaartoyda Manchester United ayaa muujiyay jaceylka ay u qabaan xiddigga amaahda ugu biiray west ham ee Jesse Lingard Xiddiga qadka dhexe ee England ayaa dhaliyay labo gool amaahdii ugu horeysay waxaana uu kooxdiisa ka caawiyey ineey guul ka gaaraan kulankii ay la ciyaareen Aston Villa bartamihii isbuuca.
Lingard waxaa si fiican u jecel dhamaan ciyaartooyda United iyo inta badan taageerayaasha kooxda balse boos la,aan ku habsatay ayaa ku qasabtay inuu kooxda ka tago.
Wuxuu ahaa nin ciyaartii ka dhacday Villa, waxaana rajeynayaa inuu sii wado qaab ciyaareedkaas inta ka dhiman xilli ciyaareedka.
Markii Lingard uu ciyaarta ku soo qoray barta Instagram, qaar badan oo ka mid ah asxaabtiisa United ayaa si fiican uga jawaab celiyay.
Harry Maguire iyo Bruno Fernandes labaduba waxay doorteen emojis dabka, halka Marcus Rashford uu qoray \_”Congrats bro!!
Previous articleHazard oo ka qoomameynaya inuu ka tago chelsea.
Next articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Messi, Aguero, Haaland, En-Nesyri, Wan-Bissaka, Hazard, Mbappe